ထိုင်းနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးပြန်လည် နလံထူရန် ရက်ပေါင်း ၁၂၀ အတွင်း ကန့်သတ်ချက်များအပြည့်အဝ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ပစ်မှတ်ထား ဆောင်ရွက်နေ - Xinhua News Agency
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရှိ အာရဝမ်ဘုရားကျောင်းတွင် ရိုးရာဝတ်စုံဖြင့် ကပြဖျော်ဖြေနေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၄ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဘန်ကောက် ၊ ဇွန် ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေး ပြန်လည် နလံထူရန် လာမည့် ရက်ပေါင်း ၁၂၀ အတွင်း နိုင်ငံခြားခရီးသွားများအတွက် အပြည့်အဝ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း နှင့် အောက်တိုဘာလတွင် နိုင်ငံ့လူဦးရေ သန်း ၅၀ ကျော်ကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်စီထိုးနှံပြီးစီးရန် ရည်မှန်းချက်ထား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချန်-အို-ချာ က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြန်လည်မဖွင့်လှစ်မီ အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေရန်ရည်ရွယ်၍ ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံထားပြီးသော နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများအား ကွာရန်တင်းဝင်စရာမလိုဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်နိုင်ရန် ရှေးပြေးအစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ဖူးခတ်မြို့အား လာရောက်ခွင့် ပထမဆုံး စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်ပရာယွတ်က တီဗွီရုပ်သံမှတဆင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့၌ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ သွားလာစား သောက်နေပုံကို တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံသည် ဇူလိုင်လမှစတင်ကာ တစ်လလျှင် ခန့်မှန်းခြေပျမ်းမျှ ကာကွယ်ဆေး အကြိမ် ၁၀ သန်းထိုးနှံပေးသွားရန် စီစဉ်ထားပြီး လာမည့် အောက်တိုဘာလ အစောပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံသား သန်း ၅၀ ကျော်ကို အနည်းဆုံး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ်စီ ထိုးနှံပြီးစီးနိုင်ရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဖူးခတ်မြို့အလှအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်က ကောင်းကင်ပေါ်မှ ရိုက်ကူးထားစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေအတွက် အန္တရာယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း ဝန်ကြီးချုပ်က “ ပြည်သူတွေရဲ့ စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်အရ ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် အခုချိန်ဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် တွက်ချက်ပြီးစွန့်စားလုပ်ရမယ့် အချိန်ရောက်နေပါပြီ ၊ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေဟာ နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်လှမ်းဖို့ အခုကတည်းက မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်သွားရမှာပါ” ဟု ဆိုသည်။
ကပ်ရောဂါကြောင့် ဖွတ်ဖွတ်ကြေခဲ့ရပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသည် စီးပွားရေးအဓိကမောင်းနှင်ပေးနေသည့် ခရီးသွားကဏ္ဍ နှင့်အတူ ပြီးခဲ့သောနှစ်က စီးပွားရေး ထိခိုက်ဆုတ်ယုတ်မှုသည် လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော်ကာလအတွင်း အဆိုးရွားဆုံး အဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ဆက်လက်၍လည်း ထိခိုက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် ဧပြီလကတည်းက ရောဂါ ကူးစက်မှု အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေတစ်ခု ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကူးစက်မှုစုစုပေါင်း၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိရှိခဲ့ရာ ယင်းမှာ လက်ရှိအချိန်အထိ COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု အဆိုးရွားဆုံး လှိုင်းတစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေခဲ့ကြောင်း ၊ ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ် ၁၀ ပတ်တာကာလအတွင်း ကူးစက်မှု အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဇွန် ၁၆ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာသစ် ၂,၃၃၁ ဦးရှိခဲ့ရာ အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၂၀၄,၅၉၅ ဦးထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း နှင့် သေဆုံးသူ ၄၀ ဦးရှိခဲ့သဖြင့် စုစုပေါင်း သေဆုံးသူအရေအတွက် ၁,၅၂၅ ဦးထိ မြင့်တက်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BANGKOK, June 17 (Xinhua) — Thailand aimed to fully reopen to foreign visitors in 120 days and give at least one shot of vaccine to about 50 million people by October to revive the economy, Prime Minister Prayut Chan-o-cha said Wednesday.
Tourism destinations that are ready could reopen to fully vaccinated foreign visitors without quarantine requirements before the broader reopening, with Phuket asapilot, Prayut said inatelevised address.
The country plans to administer an average of around 10 million doses of vaccineamonth from July, and by early October about 50 million people will receive at least one shot, he said.
Although the decision may risk an increase in infections, he said, “when we take into consideration of the economic needs of people, the time has now come for us to take that calculated risk. The priorities for our country must now advance to the next level.”
Battered by the pandemic, Thailand recorded its worst economic recession in more than two decades last year, with its key growth driver, the tourism sector, remaining hobbled.
The country has been battlingasharp surge in infections since April, its worst wave of the COVID-19 outbreak so far, with more than 80 percent of its caseload having been reported during the past 10 weeks.
(1) – Thai dancers wearing face shields perform at the Erawan Shrine in Bangkok, Thailand, May 4, 2020. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
(2,4) Tourists walk around and enjoy foods during pandemic across Bangkok city, Thailand.
(3)- Aerial photo taken on Sept. 14, 2020 shows the view of Phuket, Thailand. (Xinhua/Zhang Keren)